Fepetra sy fepetra - ULLER
VAKA FAKARO IZY IO FITAHORANA IANAO
Ireo fepetra ankapobeny ireo dia mifehy tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny Indicom Europa 2015 sl (Orinasa manana ny marika Ulller) miaraka amin'ny birao fisoratana anarana ao amin'ny Calle Zurbano 41, nandao an'i 28010 i Bajo, ary niaraka tamin'ny CIF ESB87341327 ary ireo antoko fahatelo (aorian'izany, "Mpampiasa" ") izay misoratra anarana ho toy ny mpampiasa sy / na mividy vokatra amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera an'ny tranokala ofisialin'i Uller (http://www.ullerco.com, aorian'izany ny "Store").
2. NY FAMPISORIANA ANAO
2.1 Ny mpampiasa dia adidy, amin'ny ankapobeny, ny mampiasa ny fivarotana, hahazoana ny vokatra ary hampiasa am-pahazotoana ny serivisy tsirairay amin'ny fivarotana, mifanaraka amin'ny lalàna, fitondran-tena, filaminam-bahoaka sy ireo fepetra omena Fepetra ankapobeny, ary tsy tokony hampidiranao amin'ny fampiasana azy amin'ny fomba rehetra izay manakana, manimba na manimba ny fandidiana mahazatra sy mankafy ny fivarotana ataon'ireo mpampiasa na manimba na manimba ny fananana sy ny zon'ny Uller, ireo mpamatsy azy, mpampiasa na amin'ny ankapobeny amin'ny antoko fahatelo.
3. PRODIKA SY PRESY
3.1 Uller dia manan-jo hanapa-kevitra, amin'ny fotoana rehetra, ny vokatra natolotry ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny Store. Raha ny tokony ho izy manokana, dia afaka mampiditra ny vokatra vaovao ho an'ireo izay atolotra na ampidirina ao amin'ny fivarotana, na izany na tsy voalaza, fa raha toa ka misy, dia omena ireo fepetra vaovao ireo ny fepetra vaovao. Toy izany koa, manana zo tsy hanajanona na hanamora ny fidirana sy hampiasana amin'ny fotoana rehetra izy ary tsy misy fampahafantarana mialoha momba ireo karazan-tsarimihetsika samihafa atolotra ao amin'ny fivarotana.
3.2 Ireo vokatra ampidirina amin'ny fivarotana dia hifanaraka amin'ny fomba azo itokisana indrindra izay azon'ny teknolojia fampidirana tranonkala ho an'ny vokatra natolotry ny vokatra. Ny mampiavaka ny vokatra sy ny vidin'izy ireo dia hita ao amin'ny magazay. Ny vidiny voalaza ao amin'ny magazay dia ao Euros ary tsy tafiditra ao amin'ny VAT, raha tsy misy fanamarihana hafa.
4. FAMPANDROSOANA ARY ATAIM-BOLOTRA MOMBA NY FAMPISORANA
4.1 Tao anatin'ny fe-potoana maharitra maharitra efatra amby roapolo (24) Uller handefa mailaka any amin'ny mpampiasa, hanamafy ny fividianana. Hoy ny mailaka dia hanome ny kaody famerenam-barotra ary hiresaka amin'ny antsipiriany ny toetran'ilay vokatra, ny vidiny, ny vidiny ary ny antsipiriany momba ny safidy isan-karazany hanaovana ny fandoavana ny vokatra amin'ny Ulller.
4.2 Ilay mpampiasa mividy vokatra amin'ny alàlan'ny Store dia tsy maintsy manao ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ireo rafitra fandoavam-bola amin'ny antsipirian'ny torolàlana.
4.3 Indicom Europe 2015 sl hitahiry ny tahirin-kevitra elektronika izay hanombohana ara-dalàna ny fifanarahana, mandefa kopia ho an'ny mpampiasa raha vao vita ny fividianana. Ny fifanarahana dia ho amin'ny teny Espaniôla.
4.4 Ny fanamafisana ny baiko nalefan'i Uller tsy manan-kery toy ny fidirana, fa porofon'ny mividy. Ny faktiora mifanandrify dia halefa miaraka amin'ilay vokatra.
5.1 Manana zo hiala ilay mpampiasa, izay ahafahany mifandray Uller amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny adiresy manaraka: mifandraisa @ ullerco.com ary manary ny fividianana ao anatin'ny fotoana tsy mihoatra ny fito (7) andro fandraharahana, nisaina hatramin'ny nandraisana ny vokatra. Ny vokatra dia tsy maintsy alefa miaraka amin'ilay taratasy fiverenana vita amin'ny fahavitany ary ny kopin'ny fanaterana na invoice, vita tanteraka, amin'ny alalàn'ny mpampiasa-mpividy ny vidin'ny fiverenan'ny vokatra. Ny fiverenana hoy dia hatao mifanaraka amin'ny torolàlana izay nasehon'i Ulller ny mpampiasa ho valin'ny fampandrenesany ny fampiharana ny fanalana azy. Ny mpampiasa dia tsy maintsy averin'ny mpampiasa mandritra ny fe-potoana farany (7) andro fara-fahitana avy amin'ny nanamarihan'i Ulller ny endrika fiverenany.
5.2 Ny fanesorana dia midika ny famerenana ny vola naloa. Noho izany, ny mpanjifa dia tsy maintsy manondro amin'ny taratasy famerenana ny isa sy ny tompon'ny carte de crédit izay anisany Uller Tsy maintsy ataonao ny fandoavana. Ny fe-potoana voalaza fa hatsangana dia hapetraka ao amin'ny Lalàna.
5.3 Ny zon'ny fisintahana dia tsy azo ampiasaina rehefa tsy tafaverina ao anaty fonosana tany am-boalohany ny vokatra ary rehefa tsy tonga lafatra ny vokatra.
6. NY ASA FIVORIANA
6.1 Amin'ny tranga rehetra, mitaky na fampiharana ny zon'izy ireo, ny mpampiasa dia mety mandefa mailaka any amin'ny adiresy ifandraisana @ Uller.com.
7. NY FIVAVAHANA HO AN-TRANO
7.1 Ny faritry ny varotra amin'ny faritany amin'ny alàlan'ny fivarotana dia natao ho an'ny faritry ny Vondrona Eropeana ihany, ka ny serivisy fanaterana dia natao ho an'ny faritany fotsiny. Ireo vokatra novidina tamin'ny alàlan'ny fivarotana dia halefa any amin'ny adiresy fandefasana izay nasehon'ny mpampiasa rehefa voamarina ny fandoavam-bola, ny fotoana farany ny fandefasana azy dia telopolo (30) andro napetraka amin'ny alàlan'ny lalànan'ny Lalàna.
7.2 Ny serivisy fanaterana an'ny Uller Atao amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpandraharaha lozisialy samy malaza amin'ny laza izany. Ny baiko dia tsy homena ao amin'ny Box Boxes na amin'ny hotely na adiresy tsy maharitra.
7.3 Ny sandan'ny fandefasana dia tsy tafiditra amin'ny vidin'ny vokatra. Amin'ny fotoana fividianana ny vokatra, ampahafantarina ny mpampiasa ny vidin'ny fandefasana.
8. TOROHEVITRA FAMPISORIANA SY FIVORIANA
8.1 Niaiky ny mpampiasa fa ny singa rehetra amin'ny Store sy ny vokatra tsirairay, ny fampahalalana sy ny fitaovana ao anatiny, ny marika, ny firafitra, ny fifantina, ny fandaharana ary ny fanolorana ny atiny, ary ny programa amin'ny solosaina ampiasaina amin'ny fifandraisana aminy, arovany amin'ny fananany manokana fananana ara-tsaina sy indostrialy Uller na an'ny antoko fahatelo, ary ny fepetra ankapobeny dia tsy manome azy ny fanajana ny zon'ny fananana ara-indostrialy sy avara-pianarana hafa noho ny nieritreretana manokana.
8.2 Raha tsy nomen'ny alàlana Uller na raha toa ka mety araky ny mpiasan'ny antoko fahatelo ny zo mifandraika amin'izany, na raha tsy avelan'ny ara-dalàna io dia tsy afaka mamerina, manova, manova, mampivily, manamboatra injeniera miovaova, mizara, manofa, mampindraminy, manome alalana, na mamela ny fidirana ampahibemaso amin'ny alàlan'ny karazana fifandraisana iraisan'ny rehetra amin'ireo singa voatonona ao amin'ny andalana teo aloha. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mampiasa ireo fitaovana, singa ary fampahalalana izay hidirany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fivarotana fotsiny ho an'ny zavatra ilainy manokana, ka manery ny tenany tsy hanatanteraka, mivantana na tsy ankolafy, fanararaotana ara-barotra momba ny fitaovana, singa ary fampahalalana azony amin'ny alàlan'ny mitovy.
8.3 Ny mpampiasa dia tsy tokony handà ny fanalavirana na hanodinana ireo fitaovana ara-teknika naoriny Uller na avy amin'ny fety fahatelo ao amin'ny fivarotana.
9. NY FIARAHANA DATA
9.1 Ho fanarahana ny lalàna 15/99 LOPD dia mampahafantatra aminao izahay fa ny angon-drakinao manokana sy ny fampahalalana hafa nomena anao tamin'ny alàlan'ny fisoratana anarana, ary koa ny avy amin'ny fifanakalozana izay natao, dia hampidirina sy hotehirizina ao anaty antontan-taratasy hikarakarana azy. Uller, raha mbola tsy takiana ny fanafoanana azy. Ny fikarakarana dia hapetraka amin'ny fampandrosoana sy ny fanatanterahana ny varotra, ny fijerena manokana ny vokatra sy ny serivisy izay azony ary ny fanatsarana ny fiheverana, ary koa ny fampiroboroboana ny vokatra sy ny serivisy ary ny orinasa fahatelo mifandraika amin'i Ulller.
Toy izany koa, ampahafantarina anao fa hatolotra ireo orinasa mifanerasera ireo angon-drakitrao. Uller Izy io dia hitondrana ireo tsiambaratelo ireo amin'ny maha-tsiambaratelo azy rehetra, satria izy irery ihany no mpandray azy irery ary tsy manao fanendrena na serasera amin'ny ankolafy hafa ankoatry ny voalazan'ny fitsipika ankehitriny.
Ny mpampiasa dia manome alàlana ny referral, na amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika Uller ary avy amin'ireo tompon'andraikitra etsy sy eroa, serivisy serasera ary tolotra fampiroboroboana. □ Eny, ekeko.
9.2 Ny mpampiasa dia mety hampiasa amin'ny fotoana rehetra ny zon'ny fidirana, fanitsiana, mpanohitra na manafoana amin'ny alàlan'ny mifandray Uller, amin'ny alàlan'ny mailaka hifandraisana @ Uller.com, mametaka ny kopin'ny NIF na antontan-taratasy famantarana fampahafantarana.
9.3. Ny valiny voamarika miaraka amin'ny * amin'ny endrika fisoratana anarana dia tsy maintsy atao. Ny valin-teny tsy ataonao dia hanakana ny fividianana ny vokatra voafantina tsy ho vita.
10. NY TAFIKA
10.1 Uller Hanamora ny fampiasana tenimiafina manokana ho an'ny mpampiasa izay misoratra anarana toy ny ao amin'ny tranokala izany. Ireo tenimiafina ireo dia hampiasaina hampidirana ireo tolotra omena amin'ny alàlan'ny tranokala. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mitazona ny tenimiafina eo ambanin'ny andraikiny tokana amin'ny fanamafisana sy hentitra indrindra amin'ny fiheverana azy, noho izany, noho izany, firy ny fahavoazana na vokatry ny karazan-javatra rehetra azo avy amin'ny fanitsakitsahana na fanambaràna ny tsiambaratelo. Noho ny antony fiarovana, ny tenimiafin'ny fidirana amin'ny telematic amin'ny serivisy mifandray amin'ny tranokala dia mety ovaina isaky ny mpampiasa foana. Manaiky ny mpampiasa hampandre an'i Ulller avy hatrany ny fampiasana ny tenimiafina tsy misy alàlana ary koa ny fidirana amin'ireo antoko fahatelo tsy nahazo alalana azy.
11. NY BOKY
11.1 Uller Mampiasa mofomamy mba hanatsarana ny serivisy, hanamorana ny fivoahana, hihazonana fiarovana, hanamarina ny mombamomba ny mpampiasa, hanamora ny fidirana amin'ny safidy manokana ary hanara-maso ny fampiasana azy ireo amin'ny fivarotana. Cookies dia rakitra napetraka ao amin'ny kapila mafy an'ny solosaina na amin'ny fahatsiarovana ny navigateur ao anaty folder napetraka napetraky ny rafitry ny solosaina ampiasain'ny mpampiasa mba hamantarana anao.
11.2 Raha tsy tian'ilay mpampiasa mametraka mofomamy ao anaty kapila mafy azy, dia tsy maintsy ampifanarahiny amin'ny fandaharam-potoana Internet izy mba tsy hahazoana azy ireo. Ary toy izany koa, mety hamotika ny cookies maimaimpoana ny mpampiasa. Raha manapa-kevitra ny hanafoana ny cookies ny mpampiasa dia mety hihena ny kalitao sy ny hafainganana ny serivisy ary na dia ho very aza ny fidirana amin'ireo tolotra sasany atolotra ao amin'ny fivarotana.
12. NY LALANA FAMPIDIKANA ARY FIKARIHANA
Ireo fepetra ankapobeny ireo dia fehezin'ny lalàna Espaniola. Ny adihevitra rehetra nateraky ny fandikana na ny famonoana mety hitranga amin'ny maha-ara-dalàna, ny fandikana, ny fanatanterahana na ny vahaolana amin'ity fifanarahana ity dia hatolotra ny Fitsarana sy ny fifaninanana ny Fitsarana sy tribonaly ao an-tanànan'i Madrid, ary mandà ny fitsarana rehetra mety hifanaraka amin'izany amin'ny mpampiasa, raha toa ka avelan'ny lalàna mihatra io.